AI နဲ့ Personal Assistant တွေက လူတွေရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုလွယ်ကူလာစေသလဲ? – DigitalTimes
FEATURES Tech Update
ချမ်းသာလွန်းတဲ့သူတွေ နာမည်ကြီးဆယ်လီတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးလက်ထောက်တစ်ယောက် (Secretary တစ်ယောက်) ဆိုတာ သွားလေရာအရိပ်လိုလိုက်၊ မက်ဆေ့ခ်ျတွေဖတ်ပေး၊ ခရီးသွားဖို့စီစဉ်ပေး၊ အလိုက်ဖက်ဆုံးအဝတ်အစားတွေရွေးချယ်ပေးပြီး တစ်နေ့တာလုပ်စရာရှိတဲ့တာဝန်မှန်သမျှကို ပြောပြပေးရတဲ့သူတွေပါ။ (Secretary Kim လိုပေါ့ 😜😜 )
အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဆယ်လီတွေ ချမ်းသာတဲ့သူတွေမဟုတ်တောင် ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက်တစ်ယောက်ထားလို့ရနိုင်နေပါပြီ။ သူတို့ကတော့ လူတစ်ယောက်လို ပြီးပြည့်စုံအောင်တော့မလုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့် လူကိုယ်တိုင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံးနီးပါးလောက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေပါပဲ။ တစ်နေ့တာအတွက် လူတိုင်းနီးပါးအတွက် လက်ထောက်တစ်ယောက်လို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တာ နည်းပညာတွေပဲရှိပါသေးတယ်။
ဒီနည်းပညာတွေကြောင့် တစ်နေ့တာဘဝတွေမှာ ဘယ်လိုလွယ်ကူလာသလဲ?
– ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေမှာ AI တွေရဲ့အားသာမှု ဥပမာ ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အချိန်အပိုထွက်လာအောင် Chat Bot သုံးလိုက်တာတွေကစလို့ ပိုရှုပ်ထွေးတဲ့အစည်းအဝေအချိန်ဇယားချတာတွေအထိ AI နဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အတွက် လူတွေအနေနဲ့က ဖန်တီးမှုတွေ စိတ်နဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက်ပဲ အချိန်ကုန်ရုံပါပဲ။
– ကုမ္ပဏီတွေမှာဆို ဒေတာစုဆောင်းတာတွေ ရလာတဲ့ဒေတာပေါ်လိုက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေ ဒါတွေကိုလူတွေထက် AI က ပိုမြန်မြန်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
– Siri တို့ Google Assistant တို့ဆိုရင်လည်း တစ်နေ့တာလုပ်စရာတွေ ဥပမာ သတိပေးချက်ထားတာတွေ alarm ပေးတာတွေ မက်ဆေ့ခ်ျပို့တာတွေကအစ ကိုယ်တိုင်လုပ်စရာမလိုဘဲ အသံနဲ့ခိုင်းစေလိုက်ရုံနဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်လောက်တောင် လွယ်ကူသက်သာလဲဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ပါလိ့မ်မယ်။
AI တွေရဲ့သင်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်၊ တစ်နေ့တာရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လူတစ်ယောက်လို စီမံပေးနိုင်တဲ့ Assistant တွေ ဒီလိုနည်းပညာတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုက လူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်စရာမလိုတဲ့လက်တိုလက်တောင်းကိစ္စတွေအတွက်အချိန်ကုန်စရာမလိုတော့ဘဲ ပိုဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကမ္ဘာကြီးကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Digital Assistant တွေရဲ့ဈေးကွက်ကလည်း ကျယ်ပြန့်လာနေပြီဆိုတော့ AI နည်းပညာတွေဒီထက်ပိုမြင့်ပိုအသုံးဝင်လာဦးမယ်ဆိုတာ ကျိန်းသေတွက်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
ခမျြးသာလှနျးတဲ့သူတှေ နာမညျကွီးဆယျလီတှရေဲ့ ကိုယျရေးလကျထောကျတဈယောကျ (Secretary တဈယောကျ) ဆိုတာ သှားလရောအရိပျလိုလိုကျ၊ မကျဆခြေျ့တှဖေတျပေး၊ ခရီးသှားဖို့စီစဉျပေး၊ အလိုကျဖကျဆုံးအဝတျအစားတှရှေေးခယျြပေးပွီး တဈနတေ့ာလုပျစရာရှိတဲ့တာဝနျမှနျသမြှကို ပွောပွပေးရတဲ့သူတှပေါ။ (Secretary Kim လိုပေါ့ 😜😜 )
အခုနောကျပိုငျးတော့ ဆယျလီတှေ ခမျြးသာတဲ့သူတှမေဟုတျတောငျ ကိုယျပိုငျလကျထောကျတဈယောကျထားလို့ရနိုငျနပေါပွီ။ သူတို့ကတော့ လူတဈယောကျလို ပွီးပွညျ့စုံအောငျတော့မလုပျပေးနိုငျပမေယျ့ လူကိုယျတိုငျလုပျရတဲ့အလုပျကလှဲရငျ ကနျြတာအားလုံးနီးပါးလောကျလုပျပေးနိုငျတဲ့ နညျးပညာတှပေါပဲ။ တဈနတေ့ာအတှကျ လူတိုငျးနီးပါးအတှကျ လကျထောကျတဈယောကျလို ဝနျဆောငျမှုပေးနိုငျတာ နညျးပညာတှပေဲရှိပါသေးတယျ။
ဒီနညျးပညာတှကွေောငျ့ တဈနတေ့ာဘဝတှမှော ဘယျလိုလှယျကူလာသလဲ?
– ထပျခါထပျခါလုပျနရေတဲ့အလုပျတှမှော AI တှရေဲ့အားသာမှု ဥပမာ ဝနျထမျးတှအေတှကျအခြိနျအပိုထှကျလာအောငျ Chat Bot သုံးလိုကျတာတှကေစလို့ ပိုရှုပျထှေးတဲ့အစညျးအဝအေခြိနျဇယားခတြာတှအေထိ AI နဲ့စီမံခနျ့ခှဲနိုငျတဲ့အတှကျ လူတှအေနနေဲ့က ဖနျတီးမှုတှေ စိတျနဲ့စဉျးစားဆုံးဖွတျရမယျ့လုပျဆောငျခကျြတှအေတှကျပဲ အခြိနျကုနျရုံပါပဲ။
– ကုမ်ပဏီတှမှောဆို ဒတောစုဆောငျးတာတှေ ရလာတဲ့ဒတောပျေါလိုကျပွီး ဆုံးဖွတျခကျြခတြာတှေ ဒါတှကေိုလူတှထေကျ AI က ပိုမွနျမွနျကောငျးကောငျးလုပျနိုငျပါတယျ။
– Siri တို့ Google Assistant တို့ဆိုရငျလညျး တဈနတေ့ာလုပျစရာတှေ ဥပမာ သတိပေးခကျြထားတာတှေ alarm ပေးတာတှေ မကျဆခြေျ့ပို့တာတှကေအစ ကိုယျတိုငျလုပျစရာမလိုဘဲ အသံနဲ့ခိုငျးစလေိုကျရုံနဲ့လုပျပေးနိုငျတဲ့အတှကျ ဘယျလောကျတောငျ လှယျကူသကျသာလဲဆိုတာ ကှကျကှကျကှငျးကှငျးမွငျပါလိ့မျမယျ။
AI တှရေဲ့သငျယူနိုငျမှုစှမျးရညျ၊ တဈနတေ့ာရိုးရှငျးလှယျကူတဲ့လုပျဆောငျခကျြတှကေို လူတဈယောကျလို စီမံပေးနိုငျတဲ့ Assistant တှေ ဒီလိုနညျးပညာတှရေဲ့ရညျရှယျခကျြကိုက လူတှအေနနေဲ့ ကိုယျတိုငျလုပျစရာမလိုတဲ့လကျတိုလကျတောငျးကိစ်စတှအေတှကျအခြိနျကုနျစရာမလိုတော့ဘဲ ပိုဆနျးသဈတီထှငျနိုငျတဲ့အလုပျတှနေဲ့ ပိုပွီးဖှံ့ဖွိုးတဲ့ကမ်ဘာကွီးကို တညျဆောကျနိုငျဖို့ပါပဲ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ Digital Assistant တှရေဲ့ဈေးကှကျကလညျး ကယျြပွနျ့လာနပွေီဆိုတော့ AI နညျးပညာတှဒေီထကျပိုမွငျ့ပိုအသုံးဝငျလာဦးမယျဆိုတာ ကြိနျးသတှေကျလို့ရနိုငျပါတယျ။
Tags: AI, Digital Assistant